1. Ukusongelwa kwesipho seCylindrical lolunye uyilo olupholileyo olunokuba luncedo kwiminyhadala okanye kwiintsuku ezikhethekileyo, kuba okunene iintlobo ezininzi zokupakisha zenziwe ngobume bezinto ezifana neebhokisi zecookie, iibhokisi zetshokholethi, njl. Abantu abaninzi banokucinga ukuba indlela yokusonga yesilinda inzima, kodwa ayisiyiyo kwaphela.
2. Izixhobo zokulungisa - Iphepha lokusonga isipho - Isikere - Iteyiphu yokufihla engafihliyo - Ukuncamathela kumacala amabini
3. Yandisa iphepha lokusonga kwaye ubeke isipho sesilinda. Thelekisa ukuphakama komphetho ophezulu wephepha ukuze ulingane ngaphakathi kwebhokisi.
4. Sika iphepha kubungakanani bebhokisi oyibeke kwasekuqaleni. Ngokusika imiphetho ecaleni kwephepha
5. Xa unesongezo sesipho esinexande eside, beka ibhokisi yesipho ethe tyaba ngokuthe nkqo embindini wephepha lokusonga. Icala elinye ngokuchasene nomda wephepha ukulungiselela ukugoqwa komsongo.
6. Qalisa ukusonga ngetape ebonakalayo phakathi kwecala lephepha kunye nebhokisi yesipho.
7. Emva koko songa elinye icala lephepha ukuze uvale ibhokisi yesipho ngokuthe nkqo. Khusela i-tape ngokuqinileyo ukuze ingaveli.
8. Gcwalisa iphepha elisezantsi kuqala ukuze wenze intambo ephezulu ebhokisini. Yeyiphi akunzima ukuyidlala nayo
9. Bamba ikona yephepha elingqubana nelinye icala, lisonge ezantsi phezulu ebhokisini kwaye uncamathisele iteyiphu ebonakalayo.
10. Qala ukufaka iikona ngokucinezela umqulu wephepha kwicala elinye kwaye ucofe kude kube kubungakanani obulinganayo. Xa usongelwe amaxesha ama-3-4, sebenzisa iteyiphu yokuncamathelisa ecacileyo ukuthintela ukukhululeka. Qhubeka nokwenza oku kude kube yonke ibhokisi.
11. Xa ugqibile ngentla, yifake ibhokisi ukuze wenze ezantsi ngokuchanekileyo. Songa izibongozo kakuhle.
12. Sika iisentimitha ezimbalwa zokubambelela emacaleni amabini kuxhomekeke kubukhulu bebhebhoni. Okuncanyathiselwe ngasemva kweBo Emva koko yiza noBo uze ubeke phezulu ebhokisini embindini okanye kuyo nayiphi na indawo oyithandayo. Yiyo leyo.
13. Ukusonga isipho sesilinda akunzima konke konke. Nokuba usondele kwixesha lomnyhadala, ukuba ufuna ukunika isipho sokubonisa uthando Ukukhathalela abo bakungqongileyo Emva koko kuya kufuneka usonge isipho ngolu hlobo Emva koko zama ukuyisebenzisa kunye